တစ်ခါစားပြီး တစ်သက်လျှာပေါ်စွဲနေစေမယ့် ထိုင်းအရသာ – FoodiesNavi
တစ်ခါစားပြီး တစ်သက်လျှာပေါ်စွဲနေစေမယ့် ထိုင်းအရသာ
By yin sandi On December 27, 2017 0
ထိုင်းအရသာ ပူစပ်စပ်လေးကိုမှ မြန်မာ့လျှာနဲ့ ကွက်တိဖြစ်မယ့် One Zabb ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ဘုန်းကြီးလမ်းမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကမှ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကျွန်းတောလမ်းမှာ One Zabb2ကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ နေ့လည် (၁၂)နာရီကနေ ည (၉) နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါစားဖူးရုံနဲ့ တစ်သက်စွဲလမ်းသွားစေမယ့် One Zabb ဆိုင်တွေရဲ့လိပ်စာကတော့
1 -phone gyi road,opposite side of KBZ bank, Lanmadaw Township,Yangon.
2-Kyun Taw Street, Sanchaung Township, Yangon
One Zabb ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အရသာ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ ဝက်ဂုတ်သားကင် ၊ ဝက်သာကူလုံးအစာသွတ် ၊ ပြောင်းဖူးထောင်း ၊ ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်း ၊ သခွားသီးထောင်း ၊ ဂဏန်းထောင်း ၊ ကြက်ခြေထောက်ထောင်း ၊ ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ် ၊ မှိုကန်စွန်းချဉ်စပ် ၊ သီးစုံထောင်း ၊ မျှစ်အစပ်သုတ်၊ အရှ့ပိုင်း ကြက်သားဟင်းရည်၊ ကြက်ဆီထမင်း စတာတွေအပြင် ယိုးဒယား ရွှေရင်အေး ၊ သီးစုံရေခဲသုပ် ၊ ချောကလက် ရေခဲသုတ်၊ Rainbow ရေခဲသုတ် စတဲ့ အစပ်ပြေ Drinks ကောင်းကောင်းလေးတွေပါရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အရသာအရမ်းထူးခြားပြီး ပေးရတဲ့ စျေးနှုန်းကလည်း တန်တာကြောင့် စားသုံးသူများပြားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့လည်စာစားချိန် သွားမယ်ဆိုရင်တော့ စောစောလေး နေရာ သွားဉီးဖို့တော့ လိုမယ်နော်။ ယိုးဒယားအစားအစာ ကောင်းကောင်းဆိုရင် One Zabb ကို သတိရလိုက်ပါနော်။
Image Source : www.facebook.com/One-Zaab
In Restaurant Guides Tagged all thai salads, Cold drinks Leaveacomment
နှင်းဆီရနံ့လေးမွှေးတဲ့ Rose Latte ကိုသောက်ချင်ပါသလား???
Menu အစုံအလင်ရရှိနိုင်ပြီး အဝစားနိုင်မယ့် ရန်ကုန်အကင်ဆိုင်